Rehefa nahazo fanairana ny zandary avy ao amin'ny Groupement de Sécurité Intérieure (GSI) sy ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena Sakaraha fa misy dahalo efa-dahy nanafika sy naka olona an-keriny tao amin’ity tanàna ity, dia nidina ifotony avy hatrany. Tao atsinanan'i Aboka Sakaraha no raikitra ny fifandonana sy fifampitifirana tamin'ireo dahalo tamin'ny 8ora sy sasany. Vokany, avotra tsy nanahy ilay nalaina an-keriny, lavo ny dahalo roa fa ny roa kosa tafaporitsaka ka mbola atao hazalambo, araka ny fampitam-baovao. Basy poleta vita gasy iray sy bala 4 ary antsibe telo no tratra tamin'ireo dahalo izay fantatra fa samy avy any Amboasary Atsimo faritra Anôsy. Basy vita gasy, saingy hita ho tena tahaka an’ireny vita vazaha ireny, ary nisy soratra hoe Germany teo amin’ity basy ity. Tena misy toeram-pamokarana basy vita gasy tena avo lenta mihitsy eto Madagasikara. Velom-pisaorana ny Ray aman-drenin'ilay zazalahy sy ny vahoakan'i Sakaraha tamin'ny hakingana sy fahaiza-manaon'ireo zandary nanavotra tao an-toerana. Manomboka miverina ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana, hoy ny fankasitrahana.